Mmetụta nke njem obe-Ngwaọrụ na Nhazi Oge-Oge | Martech Zone
Ike agwula gi na okwu omnichannel na njem ndi ahia? Gaghị adị mma karịa, n'ihi na ihe akaebe na-apụtawanye nke ọma na okwu ndị a dị oke mkpa na usoro okike nke azụmaahịa taa.
Kedu ihe bụ ahịa Omnichannel?
Omnichannel ahia bu ojiji nke uzo di iche iche n'ahịa ahia na olile anya na ndi ahia. Channels nwere ike ịgụnye otu ma ọ bụ karịa mgbasa ozi ma ọ bụ ngwaọrụ ma gụnye mgbasa ozi mmekọrịta, engines na-achọ, netwọkụ mgbasa ozi, mgbasa ozi ọdịnala, ozi ziri ezi, email, ekwentị na ndị ọzọ
Naanị ihe edeturu, anyị na-akpọ ahịa ahịa a ọtụtụ mana mana m chere na nke ahụ ajụghị oyi. Ihe ịma aka nke azụmaahịa omnichannel bụ na atụmanya a anaghị eji naanị otu oge na otu ụzọ iji soro akara gị n'ịntanetị. Ha nwere ike iji ebe ha na-arụ ọrụ na ọrụ ha, mgbe ahụ ekwentị ha, yana mbadamba mbadamba ha mgbe ha na-eme nchọgharị ma ọ bụ na-ele telivishọn, ma ọ bụ laptọọpụ ha. Ọbụna n'ime ekwentị, ha nwere ike na-emekọrịta site na mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ihe nchọgharị weebụ na ekwentị mkpanaaka, na / ma ọ bụ ngwa mkpanaaka.
Tinye na nhazi omume na-anọghị n'ịntanetị, dị ka ịgagharị n'ụlọ ahịa gị, ị nwere nsogbu na aka gị mgbe ị na-anwa ịkọwa mkpebi ịzụta ma gbalịa ịhazi ahụmịhe ịntanetị na nke offline maka onye ọbịa. Usoro ahia ọgbara ọhụrụ na-amalite iwere achịcha ndị ọrụ na-ahapụ ma bido ijikọ ntụpọ iji mee ihe ngosi doro anya. signal na-atụ aro atọ C: kee, jide ma mezie; iji nọgide na-asọpụrụ data gị ma hazie ahụmịhe ahụ.
Ndị na-azụ ahịa agafela omume ndị olulu ahịa ọdịnala buru n'amụma, ụzọ ndị ahịa zụrụ aghọọla nke okporo ụzọ gbagọrọ agbagọ, nwere ọtụtụ isi ihe ntinye na ịpụ. N'agbanyeghị (ma ọ bụ ikekwe n'ihi) ịba ụba nke ọwa ahịa, site na mgbasa ozi mgbasa ozi na ịkwụ ụgwọ-kwa-pịa, ozi ziri ezi na mgbasa ozi mmemme, ọ na-esiri ụlọ ọrụ ike ịghọta ihe na-eme ka ndị ahịa pịa ịzụta.
Maka nnukwu mkparịta ụka na azụmaahịa mmekọrịta oge, gbaa mbọ gee ntị na mkparịta ụka anyị Jess Stephens kwuru. Marketingzụ ahịa oge na-abawanye ọnụego ntụgharị site na nkezi nke 26% na 61% nke ndị na-azụ ahịa nwere ike ịzụta n'aka ụlọ ọrụ na-ewepụta ọdịnaya ahaziri iche.
Tags: cross-ngwaọrụ ahịa njemnjem ndị ahịainfographickeonweozugboezigbo oge ahịamgbaàmà